के हृदयाघात पीडादायी हुन्छ ? – Health Post Nepal
२०७५ असोज १२ गते २१:२५
मैले मेरो बुबा गुमाएँ, कडा हृदयाघातका कारण । उनलाई मृत्युको समय कति दुख्यो होला भन्ने कुराले म अझै पनि झस्किन्छु । यो मेरो प्रश्न हो– के हृदयाघातमा पीडा हुन्छ ? १८ महिनाअघि मेरा अभिभावक होलिडे मनाउने क्रममा कम्ब्रियामा थिए । उहाँहरु भर्खरै मात्र डिनरको तयारी गर्दै हुनुहुन्थ्यो । मेरी आमाले ड्रिंक मात्र अर्डर गर्नुभएको थियो । बाबा टेबुलमा बस्नुभएको मात्र थियो । उहाँ टेबुलमा बस्नुभएको मात्र के थियो, भन्नुभयो, ‘ओ गड !’ र विलय हुनुभयो । उहाँले यो कुनै आश्चर्य, स्तब्ध, डर, दुःख या अप्रत्याशित मुडमा भन्नुभएको थिएन । त्यसैले त्यहाँ कुनै धार्मिक अन्धविश्वास पनि जोडिएको थिएन ।
यसले मलाई त्योभन्दा पनि बढी दुःखी बनायो जतिवेला उहाँ असाध्य दुःखमा दुख्ने गर्नुहुन्थ्यो । यसले मलाई अझै पनि मर्माहत बनाउँछ, बनाइरहेको छ ।
तर, उहाँले यो जीवनको इस्तिफा दिँदै भन्नुभएको थियो, पराजित हुनुहुन्थ्यो । यद्यपि उहाँमा पहिले कहिल्यै मुटुको समस्या पाइएको थिएन । जुन समय उहाँलाई यो कुरा अनुभूत भयो कि, यो हृदयाघात नै हो र त्यसले उहाँलाई लाँदै छ, भन्नुभयो, ‘ओ गड !’ ठ्याक्कै त्यस्तै तरिकाले जब उहाँलाई लाग्थ्यो कि म्यानचेस्टर युनाइटेडले गेम हार्दै छ, उहाँ सधैँ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो– ओ गड ! निरुत्साहित र निरास ।
यसले मलाई नराम्रोसित दुखायो, मर्माहत बनायो । यसले मलाई त्योभन्दा पनि बढी दुःखी बनायो जतिवेला उहाँ असाध्य दुःखमा दुख्ने गर्नुहुन्थ्यो । यसले मलाई अझै पनि मर्माहत बनाउँछ, बनाइरहेको छ । इमानदारीका साथ भन्न चाहन्छु, यो मुख्य कुरा होइन कि कुन तरिकाले तिम्रा बाबु मरे वा मेरा बाबु मरे । या त तिनीहरु दुःखमा गुज्रिरहेका थिए, हरेस थिए, पराजित थिए अथवा तिनीहरुलाई त्यो अनुभूत गर्ने समय नै थिएन । त्यसले मलाई अधिकभन्दा अधिक पिरोल्ने गथ्र्यो, अहिले पनि त्यत्तिकै दुख्छ र वर्षौंसम्म मर्माहत बनाइरहनेछ ।
मैले वास्तवमै बुझेँ, तपाईं कहाँबाट आउनुभएको हो । तपाईंसँग संघर्ष गर्ने सम्पूर्ण अधिकार छ, संकटको अनुभूत गर्ने अधिकार छ । र, यो भयभीत दुनियाँको स्वस्थ पाटो पनि हो ।
यद्यपि, म यो तपाईंहरुमाथि नै छोड्दै छु ।
मैले यो मृत्युसँग पुरानो जागिर छोड्नुभन्दा पहिल्यै सामना गरेँ, अझै पनि गर्दै छु । तर, त्यो मृत्यु अवर्णनीय थियो । मैले गर्दै आएको काम वृद्धवृद्धाको स्याहार छोड्नुपरेको थियो र मेरो मानसिक समस्या टाउकोसम्म पुगिसकेको थियो ।
(एन्ड्रिव बेर्डले २०१५ मा आफ्नो बाबुको मृत्युपछि लेखेको लेख)अमेरिकाबाट सञ्चालित लोकप्रिय प्रश्नउत्तर वेभसाइट क्योराडटकममा प्रकाशित प्यालेटिभ केयरमा कार्यरत बेर्डको अनुभुति लेखमा थुप्रै सिनियर कार्डियोलोलिस्टहरुले हृदयाघातका कारण हुने मृत्यु कस्तो हुन्छ भन्ने बयानसहित उत्तर पठाएका थिए ।